Manchester United Oo Go'aan Ka Gaadhay Kabtanimada Cristiano Ronaldo Kaddib Waraysi Adag Oo Uu Bixiyey - GOOL24.NET
Manchester United Oo Go’aan Ka Gaadhay Kabtanimada Cristiano Ronaldo Kaddib Waraysi Adag Oo Uu Bixiyey
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa go’aan ka gaadhay in kabtankeeda rasmiga ah ay u magacowdo xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo kaddib marikii uu su’aal ka keenay heerka qaan-gaadhnimada maskaxeed ee ciyaartoyda da’yarta ah ee Red Devils.
Waraysi uu Khamiistii bixiyey ayuu Ronaldo ku sheegay in ciyaartoyda da’yarta ahi aanay si fiican u falcelinayn marka ay timaaddo dhalleecayn, waxaanu ka digay xilli ciyaareed madow oo kooxdu ay geli doonto haddii ay xiddigaha da’yarta ahi beddelin sida ay haatan u ciyaarayaan.
Falcelin badan ayaa ka dhalatay waraysigan, waxaana markiiba su’aal la geliyey haddii uu Ronaldo mar dambe xidhan doono kabtanimada kooxda oo uu kulankii guul-darrada ee Wolves ahaa xiddiga kabtanka loo geliyey ee ka beddelay Harry Maguire oo dhaawac ku maqnaa.
Ronaldo ayaa dhalleecayn ba’an loo jeediyey ciyaartaas iyadoo su’aal laga keenay heerka hoggaamintiida iyo inuu ciyaartoyda u noqon karayo tusaale haga oo u sameeya dhiirigelin iyo firfircoonaysiin maadaama uu yahay ciyaartoyga ugu khibradda badan ee ku jira safka Ralf Rangnick.
36 jirkan ayaa la sheegayyaa inuu ka mid yahay ciyaartoyda kacdoonka ka abuuray qolka labbiska ee aan la dhacsanayn sida uu Rangnick naadiga u hagayo iyadoo dhowaana uu wakiilkiisa ugu yeedhay UK oo ay ka wada-hadleen mustaqbalkiisa.
Tababare Ralf Rangnick ayaa ku dhawaaqay go’aanka uu ka gaadhay Cristiano Ronaldo ee kabtanimada oo ay jirtay hadal-hayn ah in Harry Maguire laga wareejinayo, waxaanu yidhi: “Hadda ma jirto sabab aan Harry uga qaadno kabtanimada mar haddii uu ciyaarayana isaga ayaa ahaanaya. Haddii aanu ciyaarayn, markaas ayaanu qof kale ka dhigi doonaa kabtanka. Tani waxay isku beddelaysaa kulanba kulanka xiga, waxaanay ku xidhan tahay cidda ciyaaraysa.”
Isaga oo tababaruhu hadalkiisa sii wata, waxa uu bixiyey qish la xidhiidha in Ronaldo aanu mar dambe u xidhayn, waxaanu yidhi: “Kaliya Cristiano ma aha. Waxa aanu haysanaa Edinson, Harry, David de Gea, Victor Lindelof iyo Bruno Fernandez. Dhamaantood waa ciyaartooyo khibrad leh oo kaliya aan door muhiim ah ka qaadanayn tababarka laakiin sidoo kale ciyaartoyda kula hadla oo ugu sheekeeya qolka labbiska iyo hotelka ka hor kulamada aanu garoonkayaga ku dheelayno.”